Ciyaartoyda u sharraxan abaal-marinta xiddiga bisha October ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey…. (Kooxaha waaweyn oo labo ku leh) – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Ciyaartoyda u sharraxan abaal-marinta xiddiga bisha October ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey…. (Kooxaha waaweyn oo labo ku leh)
England(SONNA)-Waxaa la shaaciyey ciyaartoyda u sharraxan abaal-marinta xiddiga bishii October ugu fiicnaa horyaalka Premier League, waxaana ku tartamaya lix ciyaaryahan oo wacdaro ka dhigay horyaalka bishii la soo dhaafay.
Ilkay Gundogan, Willian, Jamie Vardy, ayaa ka mid ah musharixiinta abaalmarinta Premier League ee billaha ah ee bisha October.
Kabtanka Aston Villa ee Jack Grealish ayaa qeyb ka ah musharraxiinta abaal-marinta laacibka bisha, wuxuu kaalin muhiim ah ka qaatay laba guulood ay kooxdiisa gaartay bishii lasoo dhaafay, waxay 5-1 kaga badiyeen Norwich City, wuxuuna dhaliyay gool, halka sidoo kale uu gool caawiyay kulankii ay 2-1 kaga badiyeen Brighton & Hove Albion.
Xiddiga xulka qaranka Germany iyo kooxda Manchester City ee Ilkay Gundogan ayaa qeyb ka ah liiskan musharaxiintan kaasoo bishii hore si cajiib ah ugu ciyaaray khadka dhexe kooxda difaacaneysa horyaalka Premier League, isagoo 94% baasaskii uu sameeyay ay noqdeen kuwa sax ah saddexdii kulan uu ciyaaray, wuxuuna sidoo kale dhaliyay gool ciyaartii ay 3-0 kaga adkaadeen Aston Villa.
Goolhayaha kooxda Sheffield United ee Dean Henderson ayaa ilaashaday shabaqiisa labo kulan, waxaana ka mid ah kulankii ay 1-0 kaga adkaadeen Arsenal, wuxuuna sameeyay siddeed badbaadin, xilli Sheffield United aysan wax guuldaro ah la kulmin bishii October.
Xiddiga khadka dhexe ee reer Belguin iyo kooxda Leicester City ee Youri Tielemans ayaa wuxuu dhaliyay gool cajiib ah kulankii ay wajaheen naadiga Burnley, wuxuuna sidoo kale dhaliyay gool isla markaana sameeyay caawin kulankii Leicester City ay 9-0 kaga badisay Southampton.
Jamie Vardy ayaa sidoo kale shabaqa soo taabtay kulankii Burnley wuxuuna seddexleey ku soo dhaliyay garoonka St Mary ee kooxda Southampton, wuxuuna hoggaaminayaa tartanka gooldhalinta ee horyaalka Premier League, isagoo ilaa iyo haatan dhaliyay 9 gool.
Xiddiga reer Brazil ee Willian ayaa ciyaaray kaliya 20 daqiiqo oo ka mid ah saddex guul oo ay Chelsea gaartay bishii October, wuxuu caawiyay gool kulankii Southampton, ka hor inta uusan hal gool dhalinin isla kulankaas, sidoo kale wuxuu gool ka dhaliyay kulankii Burnley.